FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANY BOSTON HUAHUA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika any Boston Huahua
Alika mifangaro mifangaro i Boston Terrier / Chihuahua
Daemon the ChiBo amin'ny 2 taona— 'Tsy azoko an-tsaina alika tonga lafatra kokoa noho ny mix bitika antsika Boston Terrier / Chihuahua mix (ChiBo). Daemon ihany no te hampifaly antsika sy hankato. Tena marani-tsaina izy ary mora zatra, na dia nisy dian-doha aza rehefa tonga fanandramana trano . Mbola tsy nandinika kilalao tokana izy fa tsy azy akory. Tiany ilay zanakay 10 volana ary tsy milelalela azy na mitsako ny kilalaon-jaza dia fantany ny mahasamihafa azy. Milalao tsara amin'ny alika sy saka ary olon-tsy fantatra izy. Rehefa sambany mahita azy ny olon-tsy fantatra dia mieritreritra izy fa Boxer alika kely. Manana ny toetran'ny Ter Terry Boston mihoatra ny Chihuahua izy. Mahalana izy no mivovo raha ny tena izy dia tsy mahafehy kely noho ny Akita ahy izay tsy nateraky ny natiora. Rehefa mibontsina izy dia satria olon-tsy fantatra mandehandeha ao ambadiky ny fefy misy antsika na manandrana manantona «flyer» eo am-baravarana. Matanjaka izy ary tia milalao sy mihazakazaka fa raha mijery fahitalavitra aho dia tsy te ho eo am-pofoako fotsiny. Raha eo amin'ny solosaina aho dia eo an-tongotro izy. Maniry aho fa hanana iray hafa toa azy. '
Boston Iza no mandeha
Ny alika Boston Huahua dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Boston Terrier ary ny Chihuahua . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ny alika mixeur an'ny mpamorona rehetra izao no miteraka volafotsy 50% ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
IDCR = Registera canine mpamorona iraisam-pirenena®= Bo Chi
I Darla io tokony ho 12 herinandro eo ho eo. 'Ny reniny dia 16-lb. Boston Bull Terrier ary ny rainy dia 7-lb. lava volo Chihuahua . Tena marani-tsaina tokoa izy. Vao 12 herinandro monja dia nofanina be izy hivoaka any ivelany dia afaka mipetraka izy, mandry, hihozongozona (miaraka amin'ny tongotra roa) ary hihodina. Ny hany zavatra tena tsy vitany dia ny mandeha an-tongotra !!! Heveriko fa noho izy bitika dia nahazatra ny nitondra azy teny rehetra eny. '
mpiandry ondry mpanao ady totohondry Mix alika kely amidy
Ity i Darla, ilay fifangaroan'i Boston Bull Terrier / Chihuahua eo amin'ny 5 herinandro eo ho eo.
'Borat dia Bo-Chi ary nomen'ny namako iray ho ahy sy ny fofombadiko izay homeny hanangana azy. 14 herinandro izy tamin'izay. 10,6 lbs izy. ankehitriny ary antenaina fa eo anelanelan'ny 15-20 lbs. lehibe. Alika kely tsara fitondran-tena izy, milalao ary hendry be. Nidina haingana tany amin'ny toeram-pitsaboana izy, ary vitsy ny loza ary tsy lavitra teo. Tena be fitiavana izy ary tia voahilikina. Izy dia tsara manodidina ny ankizy kely, ny alika hafa ary ny vahiny. Tsy nampahafantarina azy ny saka ka tsy fantatsika hoe hanao ahoana izany. Efa noporofoiny fa mpiambina tsara izy ary mailaka amin'ny olona ivelan'ny varavaran'ny trano fonenany ary mampandre antsika izy fa tsy mivily be loatra. '
Baby Girl, mifangaro ao amin'ny Boston Huahua (fangaro Boston Terrier / Chihuahua) amin'ny 2 taona
She-ra ny alika kely any Boston Huahua amin'ny 7 herinandro (alika mifangaro any Boston Terrier / Chihuahua)
mpiandry alemanina pharaoh hound mix
'Sarin'i Leo ity. Izy dia fifangaroana Boston Terrier Chihuahua telo volana. Ny raim-pianakaviana dia i Boston. Ny toetrany dia milamina, mailo, mahatoky (tia ahy hatramin'ny fahafatesana izy). Hatreto dia toa manam-pahaizana manokana izy. Toa somary kely kokoa izy Boston amin'ny toetrany. Mahalana izy no mivovo. Mety hodi-kazo iray 1 hampahafantatra ahy ny olona eo am-baravarana. Tiany ny alika hafa ary tsara manodidina ny biby hafa izy. izy tsy tia avela irery fa mbola mianatra. Nanana azy roa herinandro aho ary hitako fa mora kokoa izany mampiofana azy . Tena mamy sy be fitiavana izy. Betsaka ny olona nanontany ahy hoe aiza no ahazoako alika toa azy. Milanja manodidina ny 10 lbs izy. ankehitriny ary sahabo ho 14 santimetatra ny halavany raha tsy misy ny rambony. Raha ny marina dia gaga aho fa tsara ny fitondran-tenany ary alika kely fotsiny izy. Mpinamana mahafinaritra izy. Handeha any amin'izay alehanao izy ary tiany ny fiara. Na dia alika hafa aza no ihiranan'ny alika hafa dia mangina izy. '
Lucy Loo ilay fangaro ao Boston Huahua (fangaro Boston Terrier sy Chihuahua) amin'ny 9 volana mitafy lobaka— 'Lucy Loo dia Bo Chi. Nahita an'i Lucy tamin'ny namako iray aho ary tsy afaka nangataka alika tsara kokoa. Ary hoy aho alika, tsy alika i Lucy fa namako mpiara-mitory amiko ary ny zazakeliko. Izy no zavatra mahatsikaiky indrindra hitako. Manana angovo bebe kokoa noho ny zaza 2 izy. Rehefa any ivelany izy dia mihazakazaka manodidina ahy haingana toy izay vitany ny mihazakazaka sy tia milalao fakana. Rehefa naveriny ilay kilalao dia naneso ahy tamiko izy. Raha toa aho ka manao tsinontsinona azy dia apetrany eo am-pofoako ilay kilalao na hatentiny amin'ny orony aho. Tena tiana fotsiny i Lucy. Izay rehetra sendra azy dia mifankatia aminy. Soa ihany aho fa nanana an'i Lucy Loo teo amin'ny fiainako. '
sarin'alika alika sinoa
Bo ny alika kely afangaro ao Boston Huahua (Boston Terrier sy Chihuahua) - 'Amin'ny herintaona dia be fitiavana sy hendry izy. Mieritreritra izy fa hametraka kilalao ao am-pandriana miaraka amin'ny saka, ary avy eo dia haka iray ho azy ireo hilalao. Feno heriny izy, fa raha te hipetraka tontolo andro ianao dia hijanona eo anilanao. Bo dia tovolahy mahatsikaiky izay mifanaraka amin'ny fiainantsika. Alika tsara tokoa izy. Tena tianay izy. '
Keller the Bochi Boston Terrier Chihuahua mifangaro toy ny alika kely amin'ny 4 volana— 'Keller dia Bochi. Ny rainy dia ny Ter Terra Boston ary ny Chihuahua no reniny. Izy irery no alika kely tao amin'ny fako. Tena tia olona izy, na olona tsy fantany aza. Tiany ny mandeha mitaingina sy milalao amin'ireo biby fiompinay kely. Ny kilalao ankafiziny dia ny kitron'omby sy ny baoliny. Afaka nilalao hazandrano nandritra ny ora maro izy. Isak'alina dia mitraka eo akaikiko izy. Tsy zakan'ny sipako haha. Lazainy amiko amin'ny fotoana rehetra fa heverin'ny alika ho sakaizako izy. '
Sary Boston Huahua 1
amerikana staffordshire terrier shar pei mix
Fiofanana alika kely pitbull 2 ​​volana
mifangaro mastiff anglisy miaraka amin'ny rottweiler